Baarlamanka oo ansixiyey guddiga madaxa babaan ee doorashooyinka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baarlamanka oo ansixiyey guddiga madaxa babaan ee doorashooyinka
A warsame 11 February 2015 11 February 2015
Mareeg.com: Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyeen Hindise sharciyeedka Dhismaha Gudiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka iyo qaraaro ku saabsan Taagerida xawaaladaha Soomaalida Mareykanka iyo ku dhaqanka Qorista Af Soomaaliga iyo keydinta soo jireenka Soomaaliyeed.
Xildhibaanada ayaa ayaa waxaa ay Cod aqlabiyad ah ku ansixiyeeen hindise sharciyeedaas oo uu ka mid yahay Gudiga Madaxa banaan ee doorashooyinka.
Gudiga doorashooyinka asina waxaa horyaala howlo adag maadaama qorshuhu yahay in dalka doorasho ka dhacdo marka la gaaro 2016 ka marka uu dhamaado waqtiga dowladda hadda jirta.
Dhanka kale, Mudanayaasha Golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay soo gaba gabeeyeen kalfadhiga 5-aad ee baarlamaanka iyagoo galaya fasax 2 bilood ah.
Gudoonka baarlamaanka Somaaliya, Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ka codsaday Xildhibaanada in inta fasaxa ay ku jiraan ay booqdaan gobolada iska markaana la soo ogaado xaalada bulshada gobolada iyo baahiyaha ay qabaan.
Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Somalia oo soo bandhigtay waxqabadkii 2014